ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီအား ဖွဲ့စည်းရာတွင် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ အောင်မြင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သော နယ်ပယ်အသီးသီးမှ တတ်သိပညာရှင်များ၊ စီးပွားရေးပညာရှင်များ၊ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သူများ၊ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပညာတတ်လူငယ်များ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းကာ လူထုဘဝ ကြီးပွားတိုးတက်စေရန် ကြိုးပမ်းမည်ဟု သန္ဓိဌာန်ချထားပါသည်။
ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီသည် ဗဟိုဦးစီးမှုစနစ်ဖြင့်သွားသော Paternalistic Party မဟုတ်၊ ဩဇာကိတ္တိမကြီးမားသည့် ဦးဆောင်သူတစ်ယောက်တည်းကိုသာ အားကိုးသော Personalistic Party မဟုတ်၊ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး လူထုစီးပွားတိုးတက်မှု၊ တိကျသော
မူဝါဒမူဘောင်ဖြင့် လုပ်ငန်းစဥ်များပေါ်တွင်သာ အခြေခံပြီး တည်ဆောက်သွားမည့် Programmatic Party ဖြစ်ပါသည်။
Programmatic Party ဟုဆိုရာတွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ထင်မြင်ယူဆချက်အပေါ် အခြေမခံဘဲ ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် သုတေသန
တွေ့ရှိချက်များ၊ လက်တွေ့ကျသည့် သုံးသပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ မူဝါဒချမှတ်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်နေသည့် လုပ်ငန်းစဥ်များအပေါ် သင်ခန်းစာယူ၍ အနာဂါတ် မူဝါဒများ ချမှတ်သွားကာ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မည့် မူဝါဒအသားပေးပါတီဖြစ်ပါသည်။ မတူညီသည့်အဖွဲ့အစည်းများအကြား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပေးခြင်းအားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ကွဲပြားမှုများကို ပေါင်းကူးပေးခြင်းနှင့် အရေးကြီးတဲ့မူဝါဒနယ်ပယ်များမှာ အဖွဲ့ပေါင်းစုံ၏ စုပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို မြှင့်တင်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
လက်ရှိရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိသော ပြဿနာများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ၏ အခြေအနေကို သုံးသပ်ကာ လက်တွေ့ကျကျ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့် စီမံချက်များရေးဆွဲပြီး ကျွမ်းကျင်မှု၊ အရည်အချင်း၊ အတွေ့အကြုံနှင့် အရင်းအမြစ်များစုစည်းကာ ပြည်သူအများပါဝင်စေခြင်းဖြင့် ပြည်သူ့ရေးရာပြဿနာများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို အမြော်အမြင်ရှိရှိ ဖြေရှင်းသွားရန် ရည်မှန်းထားသည်။
အရည်အချင်းရှိပြီး နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလိုလားသောနိုင်ငံသားတိုင်း လူမှန်၊ နေရာမှန်ပါဝင်စေခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောသောဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဦးမြင့်မောင်ထွန်းပါ ၁၉ ဦးမှ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်တွင် ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဥ် (၁၂၂) ဖြင့် တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ရပ်တည်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။
"If good men are not willing to join politics, then they should be willing to be governed by scoundels"
EdkifiHawmfudk rl0g'ESifh vkyfief;pOfrsm;jzifh wnfaqmuf&mwGif e,fy,ftoD;oD;rS wwfodynm&Sifrsm;? tawGUtBuHK&ifhusufolrsm;? vli,frsm;ESifh vlxkvlwef;pm;aygif;pHk yg0ifvmap&ef